ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေးကို ပွဲထုတ်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ယောက်ဖလို့ အခေါ်ခံနေရတဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ - Cele Connections
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေးကို ပွဲထုတ်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ယောက်ဖလို့ အခေါ်ခံနေရတဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ
အရမ်းကို ဂေါ်လွန်းလို့ လူငယ်ပရိသတ်တွေ သဲသဲလှုပ် ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ အဆိုတော် ကျော်ထွဋ်ဆွေကတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတစ်ဦးမို့ မကြာခဏဆိုသလို ပရိသတ်တွေကို ပျော်အောင် စနောက်လေ့ရှိသူတစ်ဦးပါ။ ချစ်သူချောချောလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေကတော့ ဝါသနာချင်းတူတဲ့ ချစ်သူနဲ့အတူ အနုပညာအလုပ်တွေကို အတူလုပ်နေသူတစ်ဦးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လတ်တလောမှာတော့ ကျော်ထွဋ်ဆွေက အနုပညာအလုပ်တွေကို ခဏတာရပ်နားထားပြီး မိသားစုတွေနဲ့သာ အချိန်ကုန်ဆုံးနေလျက်ရှိပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျော်ထွဋ်ဆွေက သူ့ရဲ့ အချစ်ဆုံးညီမလေး နဒီထွဋ်ဆွေနဲ့ အတူတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေရင်း “ယောက်ဖလေး လား? ယောင်းမလေး လား ? 😅😝😝” ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ကျော်ထွဋ်ဆွေရဲ့ ညီမလှလှလေးကိုသာ မြင်ကြပြီး ကျော်ထွဋ်ဆွေတစ်ယောက် ယောက်ဖလို့ အကြီးအကျယ် အခေါ်ခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျော်ထွဋ်ဆွေရဲ့ ညီမလေး နဒီထွဋ်ဆွေကတော့ Beauty Blogger တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ သိထားပြီးသားသူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ညီမချောချောလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေကို အားကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Kyaw Htut Swe’s fb
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ညီမလေးကို ပှဲထုတျပွီးရိုကျကူးထားတဲ့ ဓာတျပုံတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ ယောကျဖလို့ အချေါခံနရေတဲ့ ကြျောထှဋျဆှေ
အရမျးကို ဂျေါလှနျးလို့ လူငယျပရိသတျတှေ သဲသဲလှုပျ ခဈြခငျအားပေးကွတဲ့ အဆိုတျော ကြျောထှဋျဆှကေတော့ ပြျောပြျောနတေတျသူတဈဦးမို့ မကွာခဏဆိုသလို ပရိသတျတှကေို ပြျောအောငျ စနောကျလရှေိ့သူတဈဦးပါ။ ခဈြသူခြောခြောလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ကြျောထှဋျဆှကေတော့ ဝါသနာခငျြးတူတဲ့ ခဈြသူနဲ့အတူ အနုပညာအလုပျတှကေို အတူလုပျနသေူတဈဦးဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ လတျတလောမှာတော့ ကြျောထှဋျဆှကေ အနုပညာအလုပျတှကေို ခဏတာရပျနားထားပွီး မိသားစုတှနေဲ့သာ အခြိနျကုနျဆုံးနလေကျြရှိပါတယျ။
ဒီတဈခါမှာတော့ ကြျောထှဋျဆှကေ သူ့ရဲ့ အခဈြဆုံးညီမလေး နဒီထှဋျဆှနေဲ့ အတူတူ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဓာတျပုံတှကေို ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ မြှဝရေငျး “ယောကျဖလေး လား? ယောငျးမလေး လား ? 😅😝😝” ဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျလာခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှကေတော့ ကြျောထှဋျဆှရေဲ့ ညီမလှလှလေးကိုသာ မွငျကွပွီး ကြျောထှဋျဆှတေဈယောကျ ယောကျဖလို့ အကွီးအကယျြ အချေါခံနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကြျောထှဋျဆှရေဲ့ ညီမလေး နဒီထှဋျဆှကေတော့ Beauty Blogger တဈယောကျဖွဈပွီး မိနျးကလေးပရိသတျတှေ သိထားပွီးသားသူတဈယောကျပါပဲ။ ပရိသတျကွီးလညျး ညီမခြောခြောလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ကြျောထှဋျဆှကေို အားကနြကွေမယျ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
အနေဝေးပေမယ့် သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရဘွဲ့တံဆိပ်ကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဖခင်အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလာတဲ့ ဘုန်းမင်းနေလ
နားချိန်မရှိအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ရင်း တန်ဖိုးကြီးလက်စွပ်ကြီးတွေဝယ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုချခဲ့တဲ့ ခင်ရူပ
ခင်ပွန်းဖြစ်သူဏကြီးနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း လျှောက်လည်နေတာကြောင့် ညီမလေး နိုင်ဖြိုးဥ ချစ်စဖွယ်စိတ်ကောက်တာခံခဲ့ရတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု